Buddy Media na Ahịa ahịa Salesforce | Martech Zone
N'ihe banyere mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi, ọdịnaya mmekọrịta nke na-ejide echiche ndị na-ege ntị bụ onye na-agbanwe egwuregwu. Buddy Media si ụlọ ahịa na-elekọta mmadụ na-enye ụlọ ọrụ echekwara echekwa nke nwere ike ịnye ndị na-ere ahịa akara aka ike ma jikwaa ụdị ọdịnaya a.
Na Nchikota Buddy Media na Uwaegu 6, salesforce.com ga-enwe igwe ojii ahịa ahịa kachasị ike nke ga-eme ka ndị ahịa gee ntị, tinye aka, nweta nghọta, bipụta, kpọsaa ma tụọ mmemme ahịa mmekọrịta. Na mmechi, anyị kwenyere na Salesforce Marketing Cloud ga-enye ndị na-ere ahịa ume ka ha mee ka ndụ ha dị mfe site na iwusi ọtụtụ ụzọ isi ike na ịnakwere ụlọ ahịa azụmaahịa jikọrọ ọnụ nke jikọtara ọnụ na ahịa ahịa igwe ojii na ngwaahịa ndị ahịa. Michael Lazerow na Nkwado Ahịa nke Buddy Media.
Ngwaọrụ a na-enye bụ:
Onyedikachi ihe dọrọ mfe na dobe interface iji mepụta ọdịnaya mmekọrịta ahaziri iche
Nweta iji kesaa ọdịnaya n'ofe ebe mgbasa ozi mmekọrịta na-adị mfe
Mkparịta ụkaBuddy ike na -ebipụta ma na-ebipụta tweets ma ọ bụ gbanwee mkparịta ụka nkịtị na tweets
Zụta imepụta, nyochaa, bulie ma tụọ mkpọsa mgbasa ozi Facebook
NtughariBuddy nke na-enye ndị ahịa ohere ịkekọrịta ọdịnaya na ozi ngwaahịa n'ofe ebe mgbasa ozi mmekọrịta.
Buddy Media jiri dashboard di omimi na ike di ọgaranya ngwaọrụ a nchịkọta. Ogwe ndị ahụ, ahaziri ya na ọba akwụkwọ nke wijetị na ịdọrọ, na-enye ohere iji usoro metrik azụmaahịa dị mkpa wee nye njikwa na mkpọsa na mmemme.
The nchịkọta nchịkọta data sitere na isi mmalite dị iche iche iji nye data zuru ezu ma rụọ ọrụ. Ọ na-enye nghọta dịka oge kachasị mma nke ụbọchị iji sonye ndị na-egwu egwu, iru ahịa, na etu arụmọrụ nke mmemme ụfọdụ si emegide ihe mgbaru ọsọ.
Nke ndetu pụrụ iche bụ ikike C-ọkwa ma ọ bụ Njikọ Ọnọdụ, akara ọnụọgụ n'etiti 0 na 100, nke bụ ihe ngosi nke ntinye aka na ntanetị mmekọrịta na ụlọ ọrụ mmekọrịta ma ọ bụ ndị asọmpi kwụ ọtọ.
Ndi ahia ahia nwere ike ime ka ulo oru Buddy di egwu, ulo oru echekwara na ihe omuma banyere otutu ihe. Ewezuga uru doro anya nke na-ebugote ma na-ejikwa ọdịnaya mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ngwaọrụ ndị a na-enye ohere ka ndị na-akwado ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ na mpaghara ma ọ bụ nke ụwa niile, na-amalite ma na-achịkwa mkparịta ụka gafee mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-atụle ROI, yana mmetụta na mmemme ahịa dị iche iche.
Pịa ebe a ịdebanye aha maka ngosipụta nke Ngwa ahịa Media Buddy.
Tags: enyi mgbasa oziZụtaMkparịta ụkaBuddyNtughariBuddyOnyedikachiNweta